'URoseanne' Ukubuyisa uJohn Goodman kaDan Conner: Ibali elipheleleyo - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Ukuvuselelwa 'kukaRoseanne' kuya kubuyisa lo Mntu uthandekayo ufileyo, kodwa ngaba kufanelekile?
Ukuvuselelwa 'kukaRoseanne' kuya kubuyisa lo Mntu uthandekayo ufileyo, kodwa ngaba kufanelekile?
URoseanne ubuyela kwiABC.UMark Mainz / Getty Izithombe
Unogumbe wakutshanje wemvuselelo kamabonwakude uphakamise lo mbuzo: Ngaba uluhlu lokugqibela luphela lusabalulekile? Sele siyazi loo nto Umyolelo kunye noGrace iya kuhoya iziganeko zesahluko sayo sokugqibela. Ngoku, kubonakala ngathi ziiABC URoseanne icwangciselwe ukwenza okufanayo ukuya kwinqanaba elithile.
UJohn Goodman 'UDan Conner wabulawa kwisiphelo sokugqibela sika-1997 kodwa uzakubuya kwimvuselelo, ekulindeleke ukuba iqale imveliso ngo-Okthobha.
Andifuni ukuthetha ngokuthe ngqo, kodwa ngekhe ndithi asizukuzihoya iziganeko zokuphela konyaka, utshilo uMongameli we-ABC yoLonwabo uChanning Dungey LEYA . Ngokuqinisekileyo uDan usaphila. Ekuqaleni, umlinganiswa wabulawa sisifo sentliziyo.
U-Goodman uhambe nabanye abadlali beqonga ngexesha le-ABC ngoMeyi ngaphambili noRoseanne Barr, uLaurie Metcalf, uMichael Fishman noLecy Goranson, LEYA iingxelo. Kodwa uthotho luza kumbuyisa njani uDan? Oko kuhlala kubonakala, kodwa akuyi kufuna umgudu omkhulu.
Njengoko besitshilo, Umyolelo kunye noGrace iya kuqalisa ukuvuselelwa kwayo nge-bevy yotshintsho ebhabha ebusweni bayo. Okona kubalulekileyo, abalinganiswa abakhokelayo baya kuhlala behlala ndawonye kwisiXeko saseNew York kunokuba bonwabele ubomi babo kunye nabanye babo kunye neentsapho. Ukuba I-NBC inokuphazamisa ngokuqhubeka ukuya kwelo nqanaba, iABC akufuneki ibenangxaki ekubuyiseleni isimilo sikaGoodman kwilizwe labaphilayo.
Kwenye indawo, uDungey uxelele oonondaba ukuba uzama ukufumana Ingcingane ekulu kakhulu inkwenkwezi uJohnny Galecki ukuphinda enze indima yakhe njengoDavid Healy. Kuya kufuneka sibone ukuba angakulungela na oko ecaleni kweshedyuli yakhe ye-CBS efunwayo.
Ngokubhekisele kokulindelwe ngabalandeli, uDungey uqinisekisile ukuba imvuselelo iya kufana kakhulu neyasekuqaleni kwaye iya kuhlala ingenasiphelo, inyanisekile kwaye ingenantlonelo ngamanye amaxesha. Imixholo ephezulu.
Inkqubo ye- URoseanne Imvuselelo kulindeleke ukuba ifumane inkulumbuso yexesha eliphakathi, ngokwe LEYA .
Nangona uthotho lokuqala lunomkhosi wabalandeli abathembekileyo, lo mkhwa mvanje usongela indlela kamabonakude yokubalisa amabali. Ngaba ababonisi bexesha elizayo baya kuba madolw 'anzima ukugqiba imiboniso yabo ngenqaku eliqinisekileyo lokushiya kuvulekile ithuba lokuvuselelwa? Ngaba imiboniso iya kulungiswa njengoMarvel's Coming Kungekudala ekwabelwana ngayo ngendalo yonke yesinema eqhubeka ngokuhlekisa ngokulandelayo? Amanethiwekhi kufuneka alumke ngomzekelo abawubeka apha. Iinkwenkwezi zithontelana rhoqo kwiscreen esincinci kuba kulapho iiprojekthi zodumo zinegumbi lokutshintsha izihlunu zazo zexesha elide. Ndiyathemba ukuba, oku kuqhubekeka kwe-nostalgia akuhambisi amandla aphezulu e-TV.
URembrandt Unokuba Upeyintile lo Mfanekiso-woZe wakhe njengesipho soMfazi wakhe
Indawo yokulahla idatha ye-FBI ibonisa ukuba uClinton ulwaphulo-mthetho kwaye akanakuKhanya
Abagcini beevenkile zaseMadison Avenue balilela i-CNN Style Diva Elsa Klensch
Umbono kaCorzine weNew Jersey: Ukusuka kulowo nalowo ngokwamandla akhe…
indawo epaki ephakathi kwiihektare
Imyuziyam yenqila yeziko lezambatho zobugcisa
inkosi yabapheki yexesha 5 ophumeleleyo
Ezona ndawo zintle ze-poker 2019
I-apple tv ibonisa ukubukela
Umboniso weenwele omtsha we-york 2017